မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: ဂျော်နီ အသက်ပေးပြီး မှာခဲ့တယ်
ဂျော်နီ အသက်ပေးပြီး မှာခဲ့တယ်
( သူကခိုးတယ်။ငါကအမှန်ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်သခိုးတွေကတမှောက် )
မိမိအိမ်ဘေးကလူက အလုပ်ထဲကလူက အဂ်လိပ်လား၊နော်ဝေလား၊
ဖင်လန်လား ဒိန်းမတ်လား နယ်သာလန်လား၊သူတို့ နဲ့ စကားတွေအဆင့်မြင့်ပြောတတ်ပြီလား
ူသူတို့ ကမြန်မာပြည်ကပြသာနာကို သေသေချာချာနားလည်ပြီဆိုရင်
သင်တို့ မှာ အပြည်ပြည် ကအင်အား စရတာဘဲပေါ့
ခဏခဏအမေးခံရဘူးတယ်။ ထိုင်းကဘာလို့ ပြေးရတာလဲတဲ့
ဘာလူမျိုးမှ မခွဲကြဘူး ဘာသာရေးအကြောင်းမပြောကြဘူး
အရောင်ပါတဲ့ ဘယ်နိူင်ရေးပါတီဖွဲ့ ဘို့ လဲမစဉ်းစားဘူး
ကျွန်တော် သက်သေပြဘို့ အထောက်အထားလိုက်ရှာတယ်။
၁၀ နှစ်ကျော်က သိမ်းထားခဲ့တာ
စီးပွားရေးသူဌေးကြီး တပ်ဆင်ချီနာဝပ် ၀န်ကြီးချုပ် လုပ်ဖို့ ပြင်တဲ့အချိန်
ဒီမိုကရေစီ ရှေ့ နေ ၀န်ကြီးချုပ် ချွန်လီဖိုင်းကို နိူင်ငံရးလောကအပြင်ကို
အခုတော့ ထိုင်းလူမျိုးတွေမှာ ဒုက်ခသည်မရှိဘူးဆိုတဲ့
၀န်ကြီးချုပ် တပ်ဆင်ချီနာဝပ် သူအခုတော့ ဒို့ လိုဒုက်ခသည်ဘဲလေ။
မှတ်တမ်းခွေကို ကြည့်ကြ သင်ခန်းစာနမူနာတွေယူကြ
နိူင်ငံရေးငကြွားကို ပြပြီးမေး အဲဒီလို နဲနဲလောက်ရှေ့ ကဦးဆောင်မှနောက်ကလိုက်။
တုန်ခါနေတဲ့ နှလုံးသားထဲက ဆိုးဝါးတဲ့ မှတ်တမ်း
ကိုဂျော်နီက ပြည်တွင်းအလုပ်တွေအများကြီး လုပ်ရမယ်လို့မှာသွားတယ်
နယ်စပ် ဖြွံဖီုးရေး ကအလုပ်ဖြစ်ရဲ့ လား
ဖန်း . .ဖန်း . .ဖန်း . . တပ်ရင်းရုံး မြောက်ဘက် ခွဲ(၁) ဘားက သေနပ်သံကြားလို့ ပြေး
ကြည့်မလို့လုပ်တုန်း ကျော်ဦး တယောက်အမောတကောရုံးပေါ် ပြေးတက်လာပါတယ်။
ကျနော်က " ဟေ့ကောင်ဘာဖြစ်လာတာလဲ " လို့ ဆီးမေးတော့။
ကျော်ဦးက " သရဲ . .သရဲ တွေ့လို့ သာတီအိတ် နဲ့ပစ်ပြီးပြေးလာခဲ့တာ " သူကဆိုပါတယ်။
"ခွီး တိုက်မယ်ခိုက်မယ်နဲ့တလျှောက်လုံး တိုက်ပွဲဆာနေတဲ့ကောင်က သူရဲကြောက်ရလားကွ" ဟု ကျနော်ကမာန်တော့ သူက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ၊
" တခွဲလုံး ဗွီဒီယို သွားကြည့်နေကြတာ ကျနော်တယောက်ထဲ ဘားစောင့်ကျန်ခဲ့တာဗျ "
သြော် တကယ်တိုက်ရဲ၊ သေရဲသော သူရဲကောင်းတယောက် သရဲတော့ကြောက်တတ်လေ၏၊ ဟုသတိရကာ သူ့ကိုအလေးအနက် ဦးညွှတ်အလေးပြုလိုက်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးပြည့်သူအရေးတော်ပုံကြီးမစခင်မှာ သူ့အကို ထွန်းထွန်းဦး ရှိရာ အာအိုင်တီ မှာ ခဏရောက်နေရင်း ကျော်ဦးတယောက် အဆွဲခံထိခဲ့ပါတယ်။ သူ့အကိုဖြစ်သူအာအိုင်တီ ကျောင်းသားကအဖမ်းခံမထိဘဲ၊ ဒီကောင်ကအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့က " မင်းက အူတူတူနဲ့ လုံထိမ်းမျက်စိနောက်အောင်ဘာသွားလုပ်မှန်းမှမသိတာ " ဟုဆီးပြောကြရာ ရယ်ကျဲကျဲမျက်နှာဖြင့်သာခပ်မဆိတ်နေလေ၏။ အဲဒါပြန်လွတ်လာပြီး နယ်ကိုပြန်ရောက်လာတော့ အရေးတော်ပုံကြီးစနေပါပြီ၊ ဒါကြောင့် သူ့ကိုစင်ပေါ်တက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ထောင်ထဲ ရောက်ခဲ့ရတဲ့ အတွေအကြုံ ပြောပြခိုင်းတာကို လုံးဝမပြောပါဘူး။ စင်ပေါ်မှာစကားပြောဘို့ ၀ါသနာမပါဘူးဆိုပြီး ဘူးငြင်းပါတယ်။ သူက ဒီကောင်တွေကို တိုက်မှရမှာ ကျနော့်ကို လုံခြုံရေး တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ပဲပေးပါ လို့သာတွင်တွင်ပြောခဲ့သူပါ။ နောက်တော့ သူနဲ့အတူ ကျောင်းသား၊လူငယ်(၅၀)ဟာ မြရာပင်အနီး တောင်ပေါ် ယာခင်းတခုမှာ အခြေခံစစ်သင်တန်း တက်ရောက်နေပါတော့တယ်။ မြို့နယ်အတွင်း ဆနွုပြပွဲတွေမှာ သူလုံးဝမပါနိုင်ခဲ့ပ၊ဲ ညပိုင်းမှာတော့ ရပ်ရွာလုံခြုံရေးတာဝန်ကို စိတ်ပါလက်ပါ ဆောင်ရွက်ပါတော့တယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တောခိုလာပြီးတော့လဲ၊ တိုက်ခိုက်ရေးပဲ အားသန်လို့ တပ်ခွဲမှုး တာဝန်ကို သူကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို ရဲဘော်တွေအားလုံးက ကျော်ဦးကနေ "ဖန်စီမက်" လို့နာမည်ပြောင်းပေးထားပါ တယ်။ သူငှက်ဖျားထလာရင် သူ့ရင်ဘတ်ပေါ် လက်တင်ကာလက်ချောင်းကလေးများကို စနွုယားတီးသလို လှုပ်နေရင်း " အမေ . . အမေ . . အမေရေ . ." ဟုညည်းတွားနေတတ်ပြီး၊ သူ့ကို ကွီနီးတိုက်ရင်သူမသောက်ပါ၊ အဲဒီတုန်းက ငှက်ဖျားအတွက် ဖန်စီမက်ဆေးပြားကိုလဲ သုံးလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ဖန်စီမက် ရယ်၊ သဘောင်္သီးထောင်းငြုပ်းသီးစပ်စပ် ရယ်စားပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း လုံးဝအဖျားမရှိတော့ဘဲ ထထိုင်ကာအကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်လို့သွားပါတယ်။ ဒါကို အစွဲပြုလို့ သူ့ကို ဖန်စီမက် လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်နာမည်တခုကိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက် မှာ ယူအန်ကို ရဖြူဂျီလျှောက်တော့။ ဒီရုံးကလူတွေလည်း သိတ်စိတ်ချယုံလို့မဖြစ်သေးပါဘူး နာမည်လွဲပြီးလျောက်မှဟုဆိုကာ သူ့နာမည်ကို ကျော်နီ ဆိုပြီးရေးထည့်လိုက်ရာကနေ နာမည်အသစ်နောက်တခုရလို့လာပါတယ်။ ဂျော်နီဆိုတဲ့ တိုက်ဒေါင်း သူရဲကောင်းကို သတိတရရှိရင်းက သူနာမည်ပြောင်းတဲ့ကိစွုဆက်ရရင် သူဘယ်လောက်ရိုးသားတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ အမည်ဆိုတဲ့အကွက်မှာ ကျော်နီ လို့နာမည်ပြောင်း ထားပြီးကာမှ အခြားအမည်ဆိုတဲ့အကွက်မှာ သူနာမည်ရင်း ကျော်ဦး ကိုထပ်ဖြည့်ရေး လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးက၀ိုင်းပြောကြသောအခါ သူထုံစံအတိုင်း ရယ်ကျဲကျဖြင့် " ဟုတ်သားဘဲ ကျနော်လဲ မလိမ်ချင်တာနဲ့ " ဟုဆိုလေ၏်။ အဲဒီ့ ကျော်ဦး (သိုမဟုတ်) ဖန်စီမက် (သို့မဟုတ်) ကျော်နီ ကနေပြီးတော့ နောက်ဆုံး ဂျော်နီ လို့နာမည်တွင် လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေတခု တောင်ပိုင်းတွင်စိုက်ထူအခြေချပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ကိုထိထိရောက်ရောက် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ခရီးဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အခိုင် အမာတွေ့မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလယ်ပိုင်း မယ်နာပလော တော်လှန်စစ်ဒေသကနေ တောင်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ ထူထောင်ရေးအတွက် ကျနော်တိုတပ်းရင်က ရဲဘော်အချို့ကိုဘန် ကောက်မှာ စုထားချိန် ဂျော်နီလည်းတယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ရဲဘော်တဦးကို လည်း သင်တန်းမှုး၊ တိုက်ခိုက်ရေးမှုး စတဲ့တာဝန်တွေနဲ့ တောင်ပိုင်းတပ်တခုမှာ စတင် ခြေကုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဌာနချုပ်က ခေါင်းဆောင်ကြီးက သူထင်ရာတွေစွတ် လုပ်နေခဲ့တာကြောင့် ခါးပြတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေထူထောင်ရေး အိမ်မက်တခု ပျက်ခဲ့ရပါ တယ်။ အဲဒီ့နောက် အိနွိယမှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားမျာအဖွဲ့ချုပ် (ABSL) ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ပြီးအခါ်၊ ထိုင်းမှာ လည်း ABSL ထိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြတော့ ဂျော်နီ ဟာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မီတီဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
၃ မှတ်မှတ်ရရ မယ်နာပလော တိုက်ဒေါင်းနဲ့ ဘုရားသုံးဆူ တိုက်ဒေါင်း တို့ထိပ်တိုက်တွေ့ ခဲ့ ကြပုံကလေးကို ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
ကျနော်တို့ ABSL ထိုင်းလန်းမှာ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းစီးကို ထိုင်းမှာရှိနေပြီး ကျောင်းသား အဖွဲ့တွေက အမြင်မရှင်းဖြစ်ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတော့က သူတို့အားလုံး အဖွဲ့ချုပ်အောက်ကိုဝင်ရမလိုလို နဲ့ ၀ိဝါဒ ဖြစ်စရာကြုံ နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘန်ကောက်မြို့ သမာဆတ်ယူနီဗာစီတီမှာ ABSL ထိုင်းရဲ့ ညီလာခံမှာ ONSOB နဲ့ အခြားကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းအာလုံးက ခေါင်းဆောင်များကိုဖိတ်ကာ အကျေအလည် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ သို့သော် ညီလာခံခန်းမအ တွင်းမှာ တယောက်တပေါက်နဲ့ လိုရင်းညီညွတ်ရေးကို ခရီးမရောက်ဖြစ်နေပါတာကြောင့်၊ ညီလာခံကို ခဏနားစေလိုက်ပြီး အဖွဲ့လိုက်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ကါ သီးသန့် ဆေွးနွေး ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဂျော်နီ တယောက်စိတ်မရှည်ဖြစ်ကာ . .
" ဟေ့ ဒီမှာ ငါ့တို့လက်တွေက သေနပ်ကိုင်လာတဲ့လက်တွေကွ ကျောင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး ဆွေးနွေးတာသိတ် အရစ်ရှည်မနေကြနဲ့ "
ဟုအသံမာမာနဲ့ ရာဇသံလိုလို အမိန့်လိုလို ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ဘယ်ရမလဲ ဘုရားသုံးဆူတိုက်ဒေါင်း အရပ်ရှည်ပြီးစိတ်တိုတတ်သော ONSOB ကိုယ်စားလှယ် ကိုကျော်သက်(ညောင်တုန်း) ကလည်း . .
" အေး ငါတို့ကလက်တွေလည်း . . ကိုင်လာတာမဟုတ်ဘူးကွ၊ မင်းလိုဘဲသေနပ်ကိုင် တိုက်လာတဲ့ကောင်တွေဘဲ " " ငါတို့လည်းညီညွတ်ချင်လို့မင်းတို့နဲ့လာညှိနေတာပေါ့ " လို့ပြန်အော်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒါ သူတိုနှစ်ယောက်ကို ဖြန်ဖြေပေးပြီးတော့ ဘုရားသုံးဆူနယ်မြေကတိုက်ဒေါင်း နဲ့ မယ်နာပလောနယ်မြေကတိုက်ဒေါင်း ချစ်ကြည်ရေးမှတဆင့် ကျောင်းသားညီညွတ်ရေး
" သမာဆတ်စာချုပ် " ကိုအောင်မြင်စွာ ချုပ်ဆိုနိုင်ပြီး ဘန်ကောက်ကျောင်းသား ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။
၄ ။ ကိုးလေးလုံး(၉၉၉၉) အောက်တိုဘာစိန်ခေါ်မှုကြီးဟာ နိုင်ငံတကာအစိုးရအားလုံးနဲ့ ပြည်သူအားလုံးက ထောက်ခံအားပေခဲ့ကြသလို၊ မြန်မာကျောင်သားများဟာအကြမ်းဖက် သမားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသက်သေပြခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ဂရုဏာ တွေကို သိမ်းကြုံးရယူခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုးလေးလုံးလှုပ်ရှားမှု ဘန်ကောက် မြန်မာစစ်အုပ်စု သံရုံးကို ရှစ်လေးလုံးကျောင်းသားများ သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်း တော်လှန်ရေးတရပ်လုံးရဲအကျိုး၊ အောင်မြင်မှုကြီးတရပ်ပါဘဲ။
ဂျော်နီ ကသူဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို အခိုင်အမာယုံကြည်စွာစွဲကိုင် တိုက်ပွဲဝင် သွားခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ တခါမှမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ လုပ်ရပ် ဗျူဟာမြောက် သေသပ်ပိယိစွာ ဦးဆောင်စီးနင်းနိုင်ခဲ့ပြီး သွေစွန်းဘို့ကိုမဆိုနဲ့ သံရုံးဝန်ထမ်း တွေအပါအ၀င်၊ ဧည့်သည်များပါ မည်သူတဦးတယောက်မှ ထိခိုက်အနာတရ မရှိခဲ့လေအောင် နှလုံးရည်ရော လက်ရုံးရည်ပါ ပြည့်စုံတဲ့ သူရဲကောင်းတယောက်အဖြစ် ဦးညွှတ်အလေးပြုပါ၏။
လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ ဖန်စီမက်၊ (ပူသူ . . အအေးကွက်လိုက်ရှာ) အစရှိတဲ့ သန်းနိုင်ရဲ့သီချင်းကို ဂစ်တာတီးတဲ့အခါတိုင်း သီဆိုတီးခတ်လေ့ရှိသူ . . အခုတော့ . . သူရဲကောင်း ဂျော်နီ တယောက် (သူဆိုနေကြသီချင်းစာသားထဲကလို) အမှောင်လမ်းကလေးထက်မှာ . . ငွေလမင်းကလေး . . မလင်းဘဲ . .ဲဖြစ်နေလေရော့မလား . . ။
ကျဆုံးသွားကြလေသော ရှစ်လေးလုံးသူရဲကောင်း အပေါင်းကိုဂုဏ်ပြုကြပါ၊
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုတဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကို . .
မျောက်ကို မျောက်မြီးနဲ့ ပြန်ချီဖမ်းတဲ့နည်းသုံးပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပစ်မှုတွေနဲ့
ဒင်းတို့ကိုတရားပြန်စွဲပြီး နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးတော်မှာ အပစ်ပေးအရေးယူကြပါ၊ . . ။
၁ -၂၆၀- ၄၂၆၄၁၂၁
ဂျော်နီ ကိုအမှတ်တရနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုနိုင်ရန် သူ့အကြောင်းကိုစာအုပ် တအုပ်ထုတ်ဝေဘို့ သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဘူးသူတွေကို အင်တာဗျူးတွေလုပ်နေပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်များဟာ နေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှာ တိုက်ပွဲပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အသက်ပေး တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါတယ်၊ တိုက်ပွဲဝင်နေကြဆဲပါ။ သူရဲကောင်းအားလုံးကို စာအုပ်မှတ်တမ်း တင်ဂုဏ်ပြုရန် အခက်အခဲများစွာရှိသော်လည်း၊ မိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာ ကျဆုံး သူရဲကောင်းများကို တဆင့်တဆင့်မေးမြန်း ပြုစုရေးသားလျင်ကား အားလုံး၏ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းများထွက်ပေါ်လာ ရမည်မှာမလွဲပါ၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ဒေသ၊တပ်ရင်းများမှ အသက်ပေးကျဆုံး၊ပျောက်ဆုံး တိုက်ပွဲဝင်သွား ကြကုန်သောသူရဲကောင်း(၆၅)ဦး၏ မှတ်တမ်းမျာကိုပြုစုလျက်ရှိပြီး စောထ ဖောင်ဒေးရှင်း အနေနဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Mr Htay Tint at 2:42 AM
Labels: ၆ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀
Htet Aung Kyaw November 29, 2011 at 11:04 AM
စောထ-ဆိုလို့ မောင်မောင်စိုး တယောက်တော့ မနေ့ညကဘဲ့ ဆုံးသွားတယ်လို့ကြားရပါတယ်။
မိုးသီး ကို မြေမြိုတောမယ်
ဦးကျော်ငြိမ်း အုပ်စုသို့ 
၂ ခြမ်းခွဲ တာလား
မကြောက်မရွံ စွန့် စားသူ ဦးသုဝေ
ဘိုသူ သင်တို့ ကြောင့်
နေဝင်းက ဒါးဒါးချင်း လှံလှံချင်း
မြန်မာဆိုရင်မရိုင်းပါနဲ့ ကိုညွန့် လွင်
မနီလွိုင် အလွမ်းပြေ Maneeloy
အသဲထဲထိနာတဲ့ နောက်ဆုံး ဒုက္ခ
နေမင်းရဲ့တယုတ်ကြီး
အိအိဝင်းရဲ့ အိုစာ မင်းစာ
မူလ စိတ်ဓါတ် ၁၉၈၈
၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈
ကျားမမရဲ့ဒေါသ
ကိုရွေထီးရဲ့ခံစားမှု
လှန့် နိူး လိုက်တဲ့စာ